Mid ka mid ah gabdhihii lagu afduubtay Kenya oo la helay | KEYDMEDIA ONLINE
Mid ka mid ah gabdhihii lagu afduubtay Kenya oo la helay
Xafso Maxamed Luqmaan oo 14kii Juun laga afduubay xaafadda Islii, ayaa la helay iyada oo nool, kadib markii ay ku jirtay gacanta koox burcad ah muddo ku dhow todobaad.
NAIROBI, Kenya - Xafsa Maxamed Luqmaan, oo ah gabar Soomaaliyed oo koox burcad ah ka afduubteen magaalada Nairobi Lix maalin ka hor, ayay Boolisku ku guuleysteen in ay soo badbadiyaan kadib baadi-goob muddo qaatay.
Haweeneydan oo 23 jir ah ayaa 14-kii Juun laga afduubay xaafadda Islii, kadib markii ay ka rawaxday xurunteeda shaqada, waxaana wehlisay gabar kale oo magaceeda lagu sheegay Xafsa Cabdiwahab.
“Xafsa Maxamed waa la helay, way nooshahay oo sifiican ayay u ladan tahay, baryadeennii waa la ajiibay. Alxamdulilaah”. Ayuu yiri qof ka mid ah qoyskeeda oo la hadlayay warbaahinta
Booliska, ayaa gabadha Soomaaliyeed ee dhibaatada loo geystay ka soo badbaadiyay guri laga guuray oo ku yaal Matopeni oo ka tirsan xaafadda isku raranta ah ee Kayole halkaas oo lagu qasbay in ay ku jirto haan nuuca biyaha lagu keydiyo ah.
Waxaa hore u soo baxay war sheegay in Xafsa u geeriyootay dhaawacyo la gaarsiiyay oo ka muuqday muuqaal ay soo bandhigeen afduubayashu, xilli ay lacag madax furasho ah weydiisanayeen ehelkeeda, balse waxaa la xaqiijiyay goor dambe in warkaasi uu been yahay, Xafsana ay nooshahay!
Dhanka kale, Hibo Faaraax, oo ka mid ahayd dhowr gabdhood oo maalmo is xigxiga la afduubtay ayaa Iyana la helay maalin ka hor, kadib markii ay madax furasho bixiyeen qoyskeeda.
Waxaa wali raq iyo ruux aan meel lagu sheegin Xafsa Cabdiwahab oo lala afduubtay Xafsa Maxamed oo ahayd gabar ka ganacsata qudaarta ka soo go'da beer ay iyadu leedahay oo ku taalla deegaanka Bura oo ka tirsan Tana River, Gobolka Xeebta ee Kenya, sida ay hooyadeed Shiindheys Sheekh Nuur, u sheegtay Warbaahinta.
Allaha U naxariistee, Najma Cabdullaahi Macallin oo ka mid ahayd gabdhaha degannada kala duwan laga afduubtay, ayaa medkeeda laga helay deegaanka Bonje ee magaalada xeebeedka Mombasa, Boooliska ayaana dad ay Soomaali ku jiraan u qabqabtay dhacdadaas.
Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya ayay soo food saartay cabsi xooggan, madaxda ayaana Booliska ugu baaqeysa in ay ka hor tagaan afduubka burcaddu geysaneyso.